Zvemagariro Zviratidzo Wako Webhusaiti | Martech Zone
Mugovera, Gunyana 15, 2012 Mugovera, Gunyana 15, 2012 Douglas Karr
Kugonesa yako saiti kune vezvenhau inzira imwe chete, asi kunyatso kuvaka gwara rehukama kutenderedza nharaunda inoungana kune imwezve imwe. Izvo zviviri hazvifanirwe kusanganiswa… imwe ndeye zvishandiso, imwe ndeye vanhu. Ramba uchifunga kuti kune akawanda, mazhinji masayiti asina zvese zvishandiso zvakapetwa, asi ane zvisingaite zvemagariro pavari.
Kwemazera, vanhu vakabvunza vezera ravanovimba nezano pamusoro pezvigadzirwa nemasevhisi. Nhasi, kunyangwe iri yekuenda-kune vhudzi kana mushandisi akavimbika wemotokari, vatengi vanoramba vachida humbowo hwekuti chimwe chinhu chakakosha kutenga kana kuisa mari pamberi pavo vasati vazvipira. Vanowana kupi iko kusimbiswa? Kubva kune vatengi vane ruzivo munzvimbo dzepedyo dzemagariro pamwe neakasununguka madenderedzwa anogadzirwa munharaunda dzepamhepo.
Tags: infographicBusiness Businesspasocial media infographicSocial Media Marketingzvemagariro humbowo infographicsocial proof webhusaitihurongwa hwevanhupasocial webhusaitipasocial webhusaiti inforgraphic
Kuvaka kuvimba kwakakosha! Yakanaka infographic.